साधारण GIS सफ्टवेयर: $ २ for को लागी GIS ग्राहक र and १०० को लागी वेब सर्वर - Geofumadas
जुलाई, 2017 Featured, जियोस्पाटियल - जीआईएस, पहिलो प्रभाव
आज हामी चाखलाग्दो दृश्यहरूमा बाँचिरहेका छौं, जसमा निःशुल्क र स्वामित्व सफ्टवेयर एकसाथ छन्, प्रतिस्पर्धाको बढ्दो सन्तुलित अवस्थामा उद्योगलाई योगदान पुर्‍याइरहेका छन्। सायद जियोस्पाटियल मुद्दा क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जसमा खुला स्रोत समाधान गैर-निःशुल्क इजाजतपत्र समाधान जत्तिकै शक्तिशाली छ; जे होस्, यी दुई चरम सीमाको सामना गर्नुपर्दा, बजार उनिहरूको लागि उठ्छ जो खुला लागि जान चाहँदैनन्, तर जसले लोकप्रिय स्वामित्वको लागत तिर्न सक्दैनन्। यो कम लागतको सफ्टवेयर हो।
यी समाधानहरूले जहिले पनि मेरो ध्यान खिचेको छ, किनकि एक जिज्ञासु तरिकामा, उनीहरूको दिलचस्प कोनाक छ। सबैभन्दा पहिले मैले मनपराएको एक मध्ये मनिफोल्ड जीआईएस थियो। आज मैले सिम्पल जीआईएस सफ्टवेयरमा नियाले, जुन एप्लिकेसनमा धेरै सुविधाहरू छन् जुन जान्न र मूल्यांकन गर्न रोचक हुन्छ।
सरल GIS सफ्टवेयर कति सरल छ
साधारण जीआईएस सफ्टवेयर (SGS) ले दुई फ्रन्टबाट कार्य प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ, पारम्परिक डेस्कटप मात्र होइन, सहयोगी पनि सर्वर मार्फत प्रदान गर्दछ जुन WMS (OGC मानक) सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछ। पछिल्लो चाखलाग्दो छ, किनभने SGS ले कब्जा गर्न, भण्डार गर्न, हेरफेर गर्न, विश्लेषणको साथ साथ स्थानिक र भौगोलिक डाटा प्रस्तुत गर्न क्षमताहरू प्रदान गर्दछ; क्षमताहरू र परम्परागत डेटाबेसको शक्ति संयोजन गर्दै।
एसजीएसको प्रस्ताव एक सजीलो सफ्टवेयर हुनु हो, छोटो सी learning्ग घुमाउने र जीआईएस गर्ने सरलता संग समाधान जुन कि मुश्किल २ 25 डलर खर्च हुन्छ। सरल जीआईएस सफ्टवेयरले गर्ने प्राय जसो अन्य निःशुल्क र स्वामित्व उपकरणहरूले गर्ने कार्यसँग मिल्दोजुल्दो छ; सायद यस समाधानको बारेमा चाखलाग्दो कुरा यो हो कि यसको व्यावहारिकता, साधारण बटनमा के गर्न चाहानुहुन्छ जुन प्रयोगकर्तालाई सबैभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ, बहु बटनहरू र प्लगइनहरूको जटिलता बिना। साधारण GIS सफ्टवेयरले मात्र नक्सा उत्पादन र प्रदर्शन गर्दैन, तर वस्तुहरू बीचको स्थानिक सम्बन्धमा आधारित वास्तविक-विश्व समस्याहरू समाधान गर्न मद्दतको लागि विश्लेषणात्मक क्षमताहरू (र यसले हामीलाई धेरै सहजै देखिन्छ) छ।
मैले परीक्षण संस्करण डाउनलोड गरेको छु, र मैले यूटाहबाट सम्पूर्ण ओएसएम डाटा लेयर डाउनलोड गर्ने प्रयास गरें। यसले करीव १० मिनेट प्रशोधन गर्दैछ, जुन सब भन्दा लामो समय लाग्यो त्यो सडकहरू तह हो, तर किनभने मैले यसलाई जियोकोड अनुरूप सोध्न भनेको छु। यो मलाई एक प्रभावशाली कुरा जस्तो देखिन्छ, कि म अन्य अनुप्रयोगहरू गर्न चाहन्छु, किनकि अन्तमा यसले यस राज्यको सम्पूर्ण आधारलाई कम गर्‍यो, यसले डाटालाई श्याप लेयरमा रूपान्तरण गर्न टोपोलॉजिकल निर्माण र विघटन कार्यहरू गरेको छ। केहि VBA मेरो साथीको सम्पादनको साथ «filibuster»उनले बोगोटामा सम्पूर्ण ओपन स्ट्रीट नक्सा आधार डाउनलोड गर्न समायोजन गरे र ... हाम्रो मित्र, बमोजोको रूपमा भन्नेछ!
देखाइएको रूपमा, यहाँबाट तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ बोगोटा को ओपन स्ट्रीट मानचित्र को शप परतहरु, समन्वय को बीच - 74.343, 4.536; -73.903,4.813।
ईमानदारीसाथ मैले बिताएको आधे घण्टाको लायक छ।
यो फिल्टर खोजको विश्लेषणमा, जियोमार्केटिंग अनुप्रयोग अनुप्रयोगहरूको लागि एकदम सरल छ। यस सफ्टवेयरको तथाकथित 'निकटता विश्लेषण' क्षमता सम्भावित प्रभावित क्षेत्रहरू निर्धारण गर्न सडक निर्माण अध्ययन सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार कम्पनीले धेरै राम्रोसँग प्रयोग गरेको छ। GPS डाटा वास्तविक समय स्थान जानकारी प्रदर्शन गर्न वा सफ्टवेयरबाट मार्ग र नेभिगेसन जानकारी प्रदान गर्न एकीकृत गर्न सकिन्छ।
नक्साको लेआउट एकदम स्वीकार्य छ, व्यावहारिक, अन्तमा के विचारहरू विचार गर्न खोजेको छ।
सरल GIS ग्राहक - डेस्कटप जीआईएस सफ्टवेयर
भेक्टर डाटा जस्तै Shapefiles, सरल GIS ग्राफिक लेयरहरू, DXF, साधारण GIS सर्भर भेक्टर, स्प्रेडशीटको साथ घटना तहहरू र ODBC कनेक्टर मार्फत कुनै डाटाबेस समर्थन गर्दछ। सीएडी-प्रकार सम्पादन एकदम व्यावहारिक छ, सामान्य कमाण्डहरूमा जस्तै अफसेट, ट्रिम, फिललेट, स्प्लिट, जोडाहरू हटाउने वा हटाउने दक्षताका साथ, अनडु / रिडो जुन मेमोरी मार्दैन, भारी कार्यहरू गरिए पनि, बेअरिingsका लागि कोगो समर्थन र दूरी, र एक कार्यात्मक स्न्याप। संक्षेपमा, पर्याप्त सम्पादन क्षमता।
सबै भन्दा आश्चर्यको कुरा, बहु-उपयोगकर्ता मोडमा फाईल सम्पादन गर्नुहोस्। यो केवल १ file बिट्सको सीमाहरूसहित पुरानो फाईल हो भनेर विचार गर्दै, जुन हामीसँग डे डिफेक्ट स्ट्यान्डर्डको रूपमा आएको थियो र जुन २० बर्ष भन्दा बढी समय पछि छुटकारा पाउन गाह्रो भएको छ।
रास्टर समर्थनको सन्दर्भमा, यसले BMP, Jpeg, Tiff, Jpeg 2000, MrSid, साधारण GIS MRI (बहु रिजोलुशन छवि), साधारण GIS सर्भर छवि तह, WMS र भर्खर tessellated WMS (WMTS) समावेश गर्दछ
साधारण GIS ग्राहक Microsoft Windows मा चल्दछ। यो एक डेस्कटप GIS सफ्टवेयर अनुप्रयोग को रूप मा काम गर्न शक्ति, हल्कापन र कार्यक्षमता छ। यदि तपाई यसलाई फाँट वा नेभिगेसनका लागि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने यो ट्याब्लेटमा चलाउन सकिन्छ जसले विन्डोजलाई समर्थन गर्दछ। यसले विषयगत नक्शा, चयन सेट, फिल्टरिंग, स्थानिक र विशेषता क्वेरीहरू, बहु-प्रयोगकर्ता मोडमा .shp फाईलहरूको सम्पादन र अवलोकनको साझा कार्य गर्दछ, यसमा उन्नत सम्पादन फंक्शन्स, नक्सा उत्पादन, जियोकोडि,, राउटि,, अन्यमा छ। म पूरै सेटको डाउनलोड क्षमता पाउँछु खुला स्ट्रीट नक्साबाट डाटा, उदाहरणका लागि संयुक्त राज्यको सम्पूर्ण राज्य, राज्यको साथ वा जिपकोडसँग भूकम्पको साथ।
तपाइँ केवल केहि क्लिकहरू प्रयोग गरी विस्तृत भूकोड गरिएको र पुरा तरिकाले मार्गवर्ती सडक नक्साहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यो रोचक गुंजाइश को छवियों को भौगोलिक प्रसोधन को लागि धेरै उपकरण शामिल छ, अनुप्रयोगों को लागि भिजुअल बेसिक (VBA) को प्रयोग गरेर सफ्टवेयर अनुकूलित गर्न को लागी।
यसले स्वीकार्य गुणस्तरका उत्पादनहरू उत्पन्न गर्दछ जुन प्रत्यक्ष रूपमा वा सामान्य ग्राफिक्स ढाँचामा अवस्थित मुद्रित हुन सक्छ जुन अन्य सफ्टवेयर संकुलहरूमा सम्मिलित हुन सक्दछ।
सरल GIS सर्भर - जीआईएस म्यापिङ सफ्टवेयर
एक नेटवर्क, स्थानीय, ब्रॉडब्यान्ड वा ईन्टरनेटमा GIS डाटा साझेदारी गर्ने आवश्यकताको साथ सामना गर्नु पर्यो, साधारण GIS सर्भर एक Microsoft Windows विन्डोज सर्भर हो जसले TCP / IP प्रयोग गर्दछ र एक स्वसंपूर्ण वेब सर्भर समावेश गर्दछ जसले भेक्टर र / वा रास्टर डाटा प्रदान गर्ने अनुमति दिन्छ। GIS ग्राहकहरूलाई डाटा नेटवर्कहरू मार्फत वा खुला जियोस्पाटियल वेब म्यापि W (WMS) सेवाहरू प्रदान गर्नुहोस्। सर्भरको नयाँ संस्करणले सरल GIS क्लाइन्टमा सिर्जना गरिएको नक्शा लिन र तिनीहरूलाई एकदम सरल तरीकाले WMS को रूपमा प्रकाशित गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं डाटा सेवा प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ र SSL प्रमाणीकरण कन्फिगर गर्नुहोस्। रिमोट जीपीएस नियन्त्रणको लागि प्लगइन मार्फत यसलाई AVL (स्वचालित वाहन स्थान) मा जडान गर्न पनि सम्भव छ।
निष्कर्षमा, साधारण जीआईएस सफ्टवेयर, उत्तर अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूका लागि लक्षित उपकरणको बावजुद, कम लागतको समाधानको रूपमा रोचक सम्भावना रहेको छ। $ २ For को लागि मैले कम अपेक्षा गरेँ; मेरो विचारमा यो सफ्टवेयर हो क्लाइन्ट-सर्भर क्षमताहरूको साथ, पर्याप्त क्षमताहरूको साथ
समयले बताउँछ यो कहाँ विकसित हुन्छ।
यो वेबसाइट हो सरल GIS सफ्टवेयर। सरल GIS ग्राहकको बारेमा विशेष जानकारीको लागि, थिच्नुहोस् यहाँ। यदि तपाईं साधारण GIS सर्भरको बारेमा पत्ता लगाउन चाहानुहुन्छ भने थिच्नुहोस् यहाँ.
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो मसंग LiDAR डाटा छ - अब के?
अर्को पोस्ट अजगर: geomatics प्राथमिकता गर्नुपर्छ भनेर भाषाअर्को »